Masar iyo Sudan oo heshiis galay xilli ay xiisadda Ethiopia kala dhaxeyso ka dartay - Caasimada Online
Home Dunida Masar iyo Sudan oo heshiis galay xilli ay xiisadda Ethiopia kala dhaxeyso...
Masar iyo Sudan oo heshiis galay xilli ay xiisadda Ethiopia kala dhaxeyso ka dartay
Khartoum (Caasimada Online) – Dalalka Sudan iyo Masar ayaa gaaray heshiis cusub, kaasi oo lagu xoojinayo iskaashi labada dhinac dhex-mara, gaar ahaan nabad galyada labada xukuumadood iyo gobolka guud ahaan.
Heshiiskan ayaa imanaya xili mudooyinkii dambe xiisad xoogan labada dal kala dhaxeysa Itoobiya, oo iyadu biyo xireen balaadhan ka sameysay wabiga Nile.
Labada dal ayaa iyagu u arka in mashruuca Itoobiya ee biyo xireenkaasi uu saameyn ku yeelanayo biyaha ay ka helaan wabiga, kaasi oo hoos uga dhacaya xadiga ay markii hore ka heli jireen.
Heshiiskaan ayaa sidoo kale cadaadis hor leh saaraya dowladda Itoobiya, oo iyadu ka madax adeygtay inay wada-hadal geliso mashruuceeda biyo-xireenka oo tijaabadiisi hore bilaabay.
Lama oga qaabka uu xukuumadda Addis Ababa ka yeeli doono heshiiskan iyo kaalinta uu ku yeelan doono muranka biyo-xireenka oo labada dowladood uu xiligan kala dhaxeeyo Itoobiya.